Ụbọchị My Pet » Anọ Common Mmekọrịta Nsogbu
emelitere ikpeazụ: Oct. 15 2020 | 3 min agụ
Ịhụnanya dị otú ahụ ihe ịrịba ihe! Ọ bụ ihe mere anyị na-anọ na ọkara ndụ anyị na-agbalị ịchọta onye. Ma mgbe anyị na-eme nke ahụ bụ nanị ọkara akụkọ. Anyị na-agbụ nwere nsogbu anyị n'ụzọ ọ bụla mmekọrịta ma na e ụzọ gbalịa idozi ndị a na-ahụkarị nke okwu nke anyị na-eche ihu. Cheta na na njedebe nke ụbọchị ahụ ị na a ediomi ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nke nsogbu ndị a bụ ibu karịa ihe i nwere ọnụ mgbe ahụ, ị ​​nwere n'ezie ihe pụrụ iche. Nee ka jigide ya. A bụ anọ nkịtị nsogbu na ndị mmadụ na-eche ihu mmekọrịta na-esi ikekwe dozie ha.
Nkwurịta okwu bụ eleghị anya kasị nkịtị mmekọrịta nsogbu e nwere. E nwere ọtụtụ nsogbu ndị nke ga-ghara ibili na a mmekọrịta ebe mmadụ abụọ na-na otu peeji nke tụnyere nke ndị na-adịghị. Nkwurịta Okwu mgbochi gbochie anyị na-egbochi ọnọdụ ndị na-ibu na ndị ọzọ mgbagwoju karịa ha n'ezie bụ. Ọ bụrụ na gị na onye òtù ọlụlụ na-ahụ na ndị a na-egbochi adị ná mmekọrịta unu na ụzọ ịgakwuru nke a bụ na ihe na-emeghe, eme ihe n'eziokwu na ndị na-abụghị ịkatọ obi. Ọtụtụ nke ọkụ nke na-agbakwunyere na mmanụ dị ọnọdụ ndị a na-abịa site a enweghị nghọta n'etiti mmadụ abụọ na N'ihi ikpe ikpe nke onye na-enweghị na-ege ntị ha n'akụkụ nke akụkọ. Gbalịa na-anọdụ ala na-ekwu okwu, okwu, okwu.
Ịchọ dị iche iche ihe
Ma ọ bụ ihe ndị ka nta dị ka ebe gaa, ebe na-eri, wdg … ma ọ bụ ibu nsogbu dị ka ebe na-ebi ndụ, ma na-ebi ndụ ọnụ ma ọ bụ ịlụ di na nwunye ma ọ bụ na ka nwere ụmụaka ma ọ bụ na-achọ dị iche iche ihe bụ nnukwu mmekọrịta nsogbu. Ma ọ ga-eme otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ n'ihi na n'agbanyeghị na anyị bụ otu onye mgbe anyị na-na na onye pụrụ iche ná ndụ anyị na anyị ka bụ ndị mmadụ n'otu n'otu nke anyị na echiche na atụmatụ nke otú anyị na-ahụ ndụ anyị na-atụgharị si. Nke a na-akpata esemokwu n'ihi na anyị na-ahụ ha dị ka-ewepụ ihe anyị chọrọ ma ọ bụrụ na nọgidere na-anyị na-agbasaghị iwe ha maka nke a. Ihe i kwesịrị ime bụ ikwu okwu ọzọ ma ị na-mkpa na-akwanyere ihe ha chọrọ, e.g. a ọtụtụ ndị chọrọ ịlụ di na nwunye na-eche na alụmdi na nwunye bụ elu na ndị ọzọ kwesịrị ekwesị karịa ndụ ọnụ ebe a onye chọrọ ndụ ọnụ ha na-adịghị ahụ ihe dị ka. Yabụ, ị chọrọ dị iche iche ihe, bụghị “mma” ihe na mkpa ka e cheta ma ọ bụ n'ụzọ ndị na-eche na ị na-eleghara ihe ma ọ bụ ọbụna na-emegbu ụzọ ha na-eche ihe ziri ezi. Hapụ bụkwa isi ebe a. Gị mkpa a na ihe ọ bụla mmekọrịta. Dị nnọọ hụ na ọ bụ ihe hà ego nke ime mere na onye ọ bụla nke gị na akụkụ.
Ego bụ mgbọrọgwụ nke ihe ọjọọ niile dị ka ha na-ekwu na mmekọrịta ọ pụrụ ịbụ a nsi na-brewing. Anyị na-ebi recessional ugboro na ọrụ bụ adịghị mgbe. Ndị mmadụ na-mgba na o nwere ike na-etinye a nje mmekọrịta gị nke bụ naanị eke. Ihe i kwesịrị ime bụ ume ọ bụla ọzọ, na-egosi onye ọ bụla ọzọ na i kweere na onye ọ bụla ọzọ na na ọnụ ị nwere ike pụta n'akụkụ nke ọzọ n'ihi na N'ikpeazụ, unu ga-. Ma ka ọ dịgodị na-arụ ụka na onye ị hụrụ n'anya ọtụtụ ndị nọ n'ụwa na-adịghị na-aga idozi ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla ọ ga-eme ka ihe ka a ugboro nde njọ.
Mmanya Iri Mmadụ Ahụ & Ndakpọ
Ndị a bụ ndị siri ike mbipụta ka onye ọ bụla mara ihe na-eme mgbe ha na-ekiri ha na onye òtù ọlụlụ dị otú ahụ na despairing ebbs. Ndụ nwere ike nke ukwuu n'ihi na onye ọ bụla na ụzọ dị iche iche na ụfọdụ ndị idi ka ndị ọzọ mma. Ihe i kwesịrị ime bụ adị n'ebe ha, na-egosi ha na ị nwere okwukwe na ha sere site na anaghị ekwu okwu anya n'elu gị isi nke ga-eme ka ha ọbụna karịa ala karịa ha ugbua bụ.